Marka aad diyaarinayso codsiyada nidaamka qalliinka Android, iyaga imtixaanka waa mid aad u muhiim ah ka hor inta iyaga bixiya in ay suuq u furan si ay u caawiyaan fogaado arrimaha dadka isticmaala oo iyaga ka soo dejisan. Mid ka mid ah siyaabaha aad loogu guulaystay tijaabinta codsiyadaas waa iyada oo la isticmaalayo ee emulator ah Android sida BlueStacks. Emulator ayaa android waa barnaamij software in emulates nidaamka qalliinka Android casriga ah. Marka software this la geliyo ee computer desktop aad, waxa kuu ogolaanayaa inaad isku dayaan in ay ka soo codsiyada in aad loogu talagalay nidaamka qalliinka Android.
Marka aad horumarinta software-ka, waxaad u furi la emulator ee Android on desktop iyo tani waxay u oggolaanaysaa inaad ogaatid oo ku saabsan wax cayayaanka in software ka hor soo bandhigid in suuqa laga yaabaa in. Mid ka mid ah habka ay u tijaabiso in aad codsatid waa isticmaalka BlueStacks. BlueStacks waa barnaamij software ah, taas oo markii lagala soo bixi on desktop kuu ogolaanayaa inaad u ciyaaro barnaamijyadooda android sidii aad u ciyaaro iyaga on desktop. Waxaa lagu qiimeeyaa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee emulators Android laga helo suuqa maanta. Waxa kale oo ay awood u user ay u riixaan Chine in ay ku kaydsan yihiin taleefannadooda si madal via server daruur ..
Marka ay timaado in emulators android, dadka intooda badan ogahay kaliya BlueStacks sida ay tahay Android emulator ugu badan. Si kastaba ha ahaatee, BlueStacks waxaa wata caqabadaha software qaar ka mid ah. Tusaale ahaan, waxa aanu u taageeraan inta badan gaadmada ah nidaamka, ka maqan interface android buuxa, waxay u baahan tahay ku rakibidda barnaamijyadooda random ama bixinta 2 $ bil ah, wax awood uma laha barnaamijyadooda screen guriga iyo waxqabadka laggy. Taas aawadeed, users ayaa raadinaya duwan.
Mid ka mid ah beddelkooda uguna haboon ee BlueStacks emulator waa isticmaalka Wondershare MirrorGo. Wondershare MirrorGo waa qalab la yaab leh qaab aan muuqan ama muraayad kartaa shaashadda telefoonka android in kombiyuutarka. Waxaa ka sii horumarsan yahay isticmaalka emulators tan iyo markii la MirrorGo, waxaad ka heli kartaa dhammaan farriimaha ka soo telefoonada ee aad PC. Waxa kale oo aad isticmaali karto si aad u qortid shaashadda telefoonka, telefoonka kulan play la mouse iyo kala iibsiga files.
Features ee Wondershare MirrorGo
Iyadoo MirrorGo, your computer helo oo dhan farriimaha aad u hesho si aad sida farriimaha, emails, qaylodhaan, xusuusinta, iwm
Looma baahna in la gaaro, waayo telefoonka. Iyadoo MirrorGo, waxa aad heli kartaa codsiyada aad jeceshahay in aad kombuutarka sida Whatsapp, Skype, Rasuul Facebook, Twitter, iwm
Baaxadda leh ee dagaalka. Iyadoo MirrorGo, aad haatan ka ciyaari kartaa kulan jecel mobile aad kombuutarka.
Waxyaabaha kale ee aad qaban karto MirrorGo ka mid ah: si xor ah file, qabashada screen, qoraalana shaashadda telefoonka iwm
Waxa ugu qabow la MirrorGo Wondershare waa in falalka yihiin Seme u dhexeeya aad PC iyo qalabka Android. Wax kasta oo aad sameyn qalabka Android bandhigo aad kombuutarka, oo wax alla wixii aad samayn on PC la soo bandhigay qalab Android aad. Maxaa fiican oo kale aan halkaan ku heysano badan emulators. Waa xog la yaab leh. Si aan ku bilaabo la Wondershare MirrorGo oo dhan ka shaqeynayaan yaabka leh u leeyahay in ay bixiyaan, waxaad u baahan doontaa si ay u qabtaan hawlahan soo socda:
Ku rakib ka Wondershare MirrorGo, app aad kombuutarka
Sahlo hab debugging USB aad Android, ayna u oggolaadaan in marka ay keentay in debugging USB.
Connect aad Android via cable USB ama xiriir Wi-Fi. No u werwero, Wondershare MirrorGo muujin doonaa tilmaamaha sida loo sameeyo nidaamkan.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka in Wondershare MirrorGo leedahay in ka badan BlueStacks emulator waa in la MirrorGo, waxaad qaadan kartaa Screenshot, ka PC soo dir qoraalka, dib ilaa xogta, kalfadhi oo kulan hadda la wadaagi kartaa adigoo computer iyo Android phone oo uu leeyahay furayaasha customizable si uu u bedelo joysticks iyo taabashada gacanta shaashadda.
Sida loo isticmaalo Wondershare MirrorGo inuu u ciyaaro Android Games
Sida ka muuqata Cutubyadii hore, Wondershare MirrorGo waa ka duwan ugu wanaagsan ee BlueStack. In tutorial this, waxaan doonayaa in aan qeexo talaabada ay nidaamka tallaabo looga baahan yahay si ay u si guul ama muraayad ka kooban qalab Android aad kuu PC. Wixii aad si guul leh si ay u isticmaalaan functionalities ee MirrorGo, waxaad u baahan tahay in marka hore la xiriiriyaan smartphone Android inay your computer.
Marka aad soo bixi oo lagu rakibay software MirrorGo ee aad kombuutarka, waxaa jira laba hab oo in ay ku xidhmaan telefoonka gacanta.
Habka 1 : XIDHIIDHKA USB
Si aad u isticmaasho USB ah in ay ku xidhmaan telefoonka gacanta si PC, marka hore waxaad u baahan tahay in ay awood u debugging USB aad smartphone android.
Marka debugging USB yahay, hubiyo adeegyada MTP ku saabsan telefoonka. Waxaad arki doontaa in xidhiidhka ka dhexeeya casriga ah iyo PC ka shaqeysiin doonaan sida Wondershare MirrorGo si toos ah loo ogaado doonaa smartphone.
Habka 2 : Wi-Fi Connection
The xiriir Wi-Fi sidoo kale waxaa laga heli karaa MirrorGo. Si aad u isticmaasho Wi-Fi, garaac badhanka 'baaritaan' on dhankiisii ​​midig sare ee app MirrorGo ah.
 lambarka sirta QR in la dhiso xiriir u dhexeeya aad telefoon iyo computer.
Ka dib markii isku xira telefoonka gacanta si MirrorGo, interface telefoonka mobile arbushin doonaa in aad kombuutarka. MirrorGo qaadi doono .Wadashaqayntaas dhexeeya hawlaha sameeyo aad PC iyo smartphone.
Si aad u ciyaaro kulan aad kombuutarka, oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa in guji icon ee ciyaarta aad rabto inuu u ciyaaro.
Ugu dambayn, si toos ah u isticmaali keyboard aad PC in ay ku shaqeeyaan ciyaarta mobile Android.
Keyboard taageertaa xukunka toobiye ciyaarta
Xogtaada kulan la hayn doonaa telefoonka aad Android aan khatarta ah ee nadaafadda.
Isticmaalayaasha ayaa la siiyaa waayo-aragnimo ciyaaraha kama dambaysta ah la shaashadaha waaweyn.
TALOOYIN & tabaha
Marka la isticmaalayo MirrorGo, telefoonka sii joogi doono xoog hab keydinta, oo waxay ka caawisaa si loo yareeyo arrimaha kululaynta. Waxay kaloo ka caawisaa in ay dhowraan batteriga telefoonada.
MirrorGo button sare: Marka aad guji badhanka midig sare, MirrorGo waxaa lagu qori doonaa sare ee shaashadda waqtiga oo dhan.
Screen aan quful: Haddii aad caajisaan ee furo telefoonada ee waqtiga oo dhan u baaraan ka hor furitaanka MirrorGo, waxaad eegi kartaa Doorashadan oo ku sahlan.
Wondershare MirrorGo, pro ayaa kama dambaysta ah ee waayo-aragnimo ciyaaraha!
Top 5 emulators online - Play kulan classic online
Top 10 emulators Dreamcast - ciyaari Mame Multiple kulan Machine Arcade aad com
> Resource > Emulator > BlueStacks Android Emulator